सधैंका लागि छोडेर गयौ बिनिता ,तिमी बिदेशबाट फर्केपछी भेट्ने भन्दा भन्दै एती धेरै दुर भयौ – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ समय: ७:५२:२९
छोरी स्तब्ध छु ! तिम्रो यो अप्रिय खबरले नि’सब्ध बनयो !! भगवान !! तिमी बिदेसबाट फर्केपछी भेट्ने.. भेट्ने भन्दा भन्दै एती धेरै दुर भईगयौ कि !!! अब हाम्रो भेट कहिले नि नहुने भयो! किन यत्ति नि’ष्ठुरी छोरी! तिम्रो आत्माले स्वर्गमा बास पाओस, हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण तिमीलाई शोकाकुल परिवारजन प्रति ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरोस छोरी बिनिता हामी सधैं तिमीलाई मिस गरिरहने छौ! – छोरीको नि’धन पस्चात krishna khaling ले लेखेको यो मनै छूने फेसबुक स्टाटस
यस्तै,बालुवाटारमा नयाँ मन्त्री मण्डल पुनर्गठनको तयारी सुरु भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालिएको हो । विहिवार जसपाका नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न वालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरुले मन्त्रीका प्रत्यासीहरुको नाम लिष्ट तयार पारेको र शुक्रवार पनि दिउसो भेट गर्दा उनीहरुले सो लिष्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको बताइएको छ ।
ओलीलाई भेट्न ठाकुर दिउसो १ वजेतिर वालुवाटार पुगेको बताइएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको समूहका पाँच नेता आज मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। राजेन्द्र महतोले उपप्रधानमन्त्रीसहित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी शरतसिंह भण्डारी ‍उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई, विमल श्रीवास्तव खानेपानी मन्त्रालय, अनिल झा शहरी विकास मन्त्री र उमाशंकर अरगरिया युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्ने निश्चित भएको स्रोतले जनाएको छ।